Qaraxyadii 1998: Sidoo loo wajahay raadinta raggii fuliyay weeraradii 1998? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Qaraxyadii 1998: Sidoo loo wajahay raadinta raggii fuliyay weeraradii 1998?
23 sano ka hor bishan oo kale waxaa dhacay labo weerar oo kooxo argagixiso ah ay mar qura ka fuliyeen magaalooyinka Nairobi iyo Daru-salaam ee dalalka Kenya iyo Tanzania.
Maxaa laga garanayaa dadkii abaabulay qaraxyadaas, maxaase laga sameeyay raadintooda?
Weerarradii dhacay bishii August ee sannadkii 1998-kii waxay gabi ahaanba baddaleen xaaladaha amniga ee gobolka geeska Afrika, waxaana la guda galay “dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada”.
Qormadan waxaan ku eegeynaa waxa laga yaqaanno saddexda nin ee loo arko in ay ahaayeen dadkii ugu waaweynaa ee ka dambeeyay weerarradaas.
7-dii bishii August ee sannadkii 1998 ayay magaalooyinka Nairobi iyo Daru-Salaam gilgileen qaraxyo abaabulan oo lala eegtay safaaradaha uu Mareykanka ku lahaa labadaas waddan.
Khasaare isugu jiray dhimasho, dhaawac iyo burbur ayaa ka dhashay, Kenya iyo Tanzaniya na waxaa u furmay bog cusub. Wali waxaa muuqda astaamaha weerarradaas iyo garaafada dadkii ay waxyeellada ba’an kasoo gaartay.
Weerarka Kenya waxaa ku dhintay 213 ruux, in ka badan 4,500 oo qofna way ku dhaawacmeen, halka Tanzania khasaaraha ka dhacay uu isugu jiray 11 dhimasho ah iyo 85 dhaawac ah.
12 ka mid ah dadka dhintay waxay ahaayeen muwaadiniin u dhashay dalka Mareykanka.
Ninka lagu tilmaamay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarradaas wuxuu ahaa hoggaamiyihii Al-Qaacida, Osama Bin Laden, kaas oo sano kaddib la dilay. Waxaa kale oo jiray rag la tuhunsan yahay in ay mas’uul ka ahaayeen fulinta weerarradaas.
Ka hor inta aannaan ka hadlin waxa laga yaqaanno saddexda nin ee lagu tilmaamay in ay fuliyeen weerarradaas, aan eegno dhacdooyinkii daba socday qaraxyadaas.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Mareykanka, Hillary Rodham Clinton ayaa tidhi: “Geerida Fazul waxay dhabar jab weyn ku tahay Al-Qaacidda iyo howlaheeda Bariga Afrika.”
Fazul Cabdallah, oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii sida weyn loo doon doonayay ee gudaha qaaradda Afrika wuxuu Mareykanka madixiisa dul dhigay $5 milyan oo doolar, oo loo ballan qaaday qofkii soo gudbiyay macluumaad horseedi kara in lasoo qabto ama la dilo.
Askar ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa rasaas ku furay gaari uu saarnaa Fazul, iyagoo ka jawaabayay rasaas looga soo furay dhanka kale, halkaasna waxaa kula dhintay qof kale oo la tuhunsane ahaa.
Ninkaas wuxuu ahaa shakhsi dhuumaaleysiga yaqaannay, wuxuuna aqoon u lahaa dhowr luuqadood.
Waxaa la aaminsan yahay inuu gacan ka geystay xeeladaha ay Al-Qaacidda ku timid gobolka iyo ficillada ay ka fulinaysay, sida qaraxyada ismiidaaminta ah, miinooyinka lagu aaso waddooyinka iyo adeegsiga maleyshiyaadka ajaanibta ah ee gudaha Soomaaliya.
Sida laga soo xigtay saraakiisha Soomaalida iyo Mareykanka, wuxuu lacago ku bixiyay in waxyaabaha qarxa la geeyo Soomaaliya, sidoo kalena wuxuu maalgalin jiray dhaqdhaqaaqyada waddanka lagu soo galinayay shakhsiyaad argagixiso ah oo laga keenay dalalka Afghanistan, Pakistan, Chechnya iyo xitaa Mareykanka.
Bishii October ee sannadkii 2013-kii, oo ahayd 15 sano kaddib markii ay dhaceen weerarradii lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa ee laga fuliyay safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, ayuu Abu Anas al-Libi, gaarigiisa dhigtay waddo buuq yar oo ku taalla caasimadda dalka Liibiya.
Xoogaa yar kaddib, ciidamada khaaska ah ee Mareykanka oo hubeysan ayaa xoog ku saaray gaari kale, wayna la baxsadeen.
Waxay durbadiiba saareen markab taagnaa badda Mediterranean-ka, ka hor inta aysan u sii gudbinin magaalada New York.
Waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan inuu gacan ka geystay dilka 224 qof, oo ay ku jiraan muwaadiniin Mareykan ah, iyo dhaawaca in ka badan 4,500 oo ruux.
Laakiin Al-Libi, oo beeniyay falalka lagu eedeeyay, ma uusan noolaanin ilaa inta laga gaarayay dhageysiga dacwaddii lagu qaadayay oo ku waqtiyeysneyd 12-kii bishii January ee sanadkii 2015-kii.
2-dii isla bishaas ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaalla magaalada New York, wuxuuna u dhintay xanuun la xiriira beerka oo laga baddalay. Da’diisu waxay markaas ahayd 50 sano.
Al-Libi, oo ar ay hay’adda FBI-da Mareykanka madixiisa dul dhigtay $5 milyan oo doolar, wuxuu qabay cagaarshowga noociisa “C” marka lasoo xirayay.
Magaca Al-Libi, oo micnihiisa luuqadda carabiga uu yahay “ninkii u dhashay Liibiya”, wuxuu ahaa naaneystiisa. Magaciisa dhabta ah waxaa la dhihi jiray Nazih Cabdul-Xamed al-Ruqaa’i.
Dacwad oogeyaasha Mareykanka ayaa sheegay in al-Libi uu ku jiray koox ka tirsan madaxda Al-Qaacidda oo amar ku bixisay weerarro ay fuliyeen oo uu ka mid ahaa kii Mareykanka lagu qaaday September 11, 2001.
Wixii markaas ka horreeyay, weerarkii ugu xumaa ee ay Al-Qaacidda u geysteen Mareykanka wuxuu ahaa kii dhacay 7-dii bishii August ee sanadkii 1998-kii, kaasoo lagu beegsaday safaaradaha Nairobi iyo Daru-Salaam.
Ninkan wuxuu taageere u ahaa Osama bin Laden, waxaana lagu helay dambi ku saabsan inuu qorsheeyay weerarradii Al-Qaacida ay ka fulisay safaaradaha Mareykanka ee Bariga Afrika, oo lagu dilay 224 qof.
Khalid al-Fawwaz, oo ahaa muwaadin u dhashay Sacuudiga, waxaa bishii February ee sannadkii 2015-kii xukun ku ridday maxkamad uu fadhigeedu yahay agaalada New York. Dhageysiga dacwaddiisa wuxuu socday saddex maalmood.
Sannadkii 2012-kii ayaa laga qaaday UK waxaana loo gudbiyay Mareykanka, si loogu maxkamadeeyo.
Al-Fawaaz, oo markaas ahaa 52 sano jir waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa afhayeenkii bin Laden ee London.
Waxaa lagu qeexay inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii uu aad ugu kalsoonaan jiray Bin Laden, taageerada weynna u hayay, xitaa waxaa lagu tilmaamay inuu u ahaa la taliye.
Mid ka mid ah howlaha loo igmaday waxay ahayd inuu warbaahinta u gudbiyo hanjabaadaha bin Laden ee ka dhanka ah Mareykanka, si caalamka loo gaarsiiyo.
Saddexdaas nin waxaa loo aaminsan yahay inay ka war qabeen qaabkii loo qorsheeyay iyo qaabkii ay u dhaceen weerarradii Kenya iyo Tanzania laga fuliyay 1998-kii.
Previous articleSheekh Shariif oo beeniyay in musharaxiinta madaxweyne ay isu tanaasuleen
Next articleBERBERA waxbarshada dadka waaweyn oo laga bilaabayo shanta xaafadood ee berbera